Guddoomiyaha Gobolka Bakool oo dalbanaya in la joojiyo go'doominta
Guddoomiyaha Gobolka Bakool oo dalbanaya in la joojiyo go’doominta
Gudoomiyaha gobolka Bakool Macalin Nuurow oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay joogsatay xaalada nololeed ee degmooyinka gobolka kadib go’doominta Al-shabaab.
Shiine Macallin wuxuu sheegay in dhibaatada bini’aadanimo ee ka jirta degmooyinka gobolka Bakool aan la arki karin wuxuuna ugu baaqay shacabka inay garab istaagaan.
“Waxa ka socda gobolkan lama hakin karo. Xaaladda maalinba maalinta ka dambeysa way ka sii daraysaa. Cunto la’aan ayaa jirta, way go’doonsan tahay mana jiraan wax gargaar ah oo ka imanaya hay’adaha gargaarka. Waxaan leeyahay dadkaasi ha la garab istaago.” Gudoomiyaha Gobolka Bakool.
Shiine Macalin Nuurow gudoomiyaha gobolka bakool ayaa sheegay in dadka kunool gobolka bakool ay ku tiirsan yihiin oo kaliya garoomada diyaaradaha, maadaama aysan jirin gawaari ganacsi oo soo gala degmooyinka.
Bokol waxay dalbatay in dadku dhayalsadaan cabashada laakiin waxay ubaahantahay in wax laga qabto, iyo inay iska kaashadaan wadooyinka go’doominta looga dhigay sidii uu hadalka u dhigay.
Inta badan Degmooyinka Gobolka Bakool ayaa waxaa gacanta ku haya Ciidamada DFS, kuwa Ethiopia iyo Saraakiisha ganacsiga gaarka loo leeyahay. Muddo dhowr sano ah, ma aysan awoodin inay furaan waddooyinka oo ay is karantiimeeyaan.
Honeymoon might quickly be over for Erdogan’s Turkey in Africa